Featured News - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
မေလ 8, 2021 မေလ 6, 2021 Sylvia ဂျိမ်းစ်	မှတ်ချက် Leave
ပုံမှန်အားဖြင့်ပျော်ပွဲစားစောင်များသည်ချောချောမွေ့မွေ့သောforရိယာအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ကမ်းခြေအားလပ်ရက်အတွက်မသင့်တော်ပါ။ အမှန်တရား ကမ်းခြေစောင်များ ကမ်းခြေအတွက်အထူးဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးသဲကိုတွန်းလှန်သောထည်ဖြင့်ပြုလုပ်သောသူများဖြစ်သည်။ သဲဒဏ်ခံနိုင်သောကမ်းခြေစောင်တစ်ချောင်းကိုသင်ဝယ်လိုပါကအောက်ပါအချက်များကိုသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုသည် -
မေလ 8, 2021 မေလ 6, 2021 McKenzie ဂျုံးစ်	မှတ်ချက် Leave
အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဟာထူးခြားထူးခြားတဲ့တွေးခေါ်မှုစွမ်းရည်ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သူတို့ကလိုအပ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးကိရိယာတစ်ခုကိုရှာသည်။ သူတို့ကကိရိယာတခုကိုကြည့်ပြီးအဲဒါကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ (သို့) အခြားချိန်ညှိချက်တခုအနေနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ထားနိုင်တယ်။ အင်ဂျင်နီယာများသည်အကြံဥာဏ်များကိုဘာမျှမှမဖန်တီးနိုင်ပါ။ အတွေးအခေါ်များကိုမြင်သာသောပုံစံသို့ထည့်သွင်းခြင်းသည်အင်ဂျင်နီယာ၏အရေးပါသောပုံစံဖြစ်သည်မှာကြာခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်းမျက်နှာပြင်မှာပြောင်းလဲသွားပြီ။
မေလ 7, 2021 မေလ 6, 2021 Sierra Powell	မှတ်ချက် Leave
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုစတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့်အလွန်အရေးကြီးသောအရာအနည်းငယ်ရှိပါသည်။ အများပြည်သူသို့တံခါးဖွင့်ခြင်းမပြုမီလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်ကိုသေချာစွာထားရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏လုပ်ငန်းအတွက်လုံလောက်သောရန်ပုံငွေလိုအပ်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးကိုစတင်ရန်လွယ်ကူသောအဆိုပြုချက်တစ်ခုဖြစ်စေရန်သော့ချက်နည်းလမ်းအချို့ကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
မေလ 7, 2021 မေလ 6, 2021 Filomena Mealy	မှတ်ချက် Leave
ပြည်တွင်းအခွန်များ ၀ န်ဆောင်မှု၊ အမေရိကန်ဘဏ္theာရေးဌာနနှင့်ဘဏ္Serviceာရေးဝန်ဆောင်မှုဗျူရိုကအမေရိကန်ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်မှရှစ်ခုမြောက်စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများပေးချေမှုတွင်ငွေပေးချေမှု ၁.၁ သန်းကျော်ကိုထုတ်ပေးနေသည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
ထိုကြေငြာချက်သည်ယခုအချိန်အထိပေးချေထားသည့်စုစုပေါင်းပမာဏအားခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၃၈၆ ဘီလီယံခန့်ရှိပြီးစုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၁၆၈ သန်းခန့်အထိစုစုပေါင်းပေးချေမှုများဖြစ်လာသည်။ ကြေငြာခဲ့သည် မတ်လ 12 ပေါ်မှာ။
မေလ 6, 2021 မေလ 5, 2021 Jeff Romero	မှတ်ချက် Leave
မင်းဘဝတစ်လျှောက်လုံးကြိုးစားပမ်းစားကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်အခုတော့နောက်ဆုံးတော့အချိန်ရောက်လာပြီ။ 55 မင်းကအနားယူတော့မှာပါ။ သင်နှင့်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်သည်မိသားစုအိမ်ဟောင်းကိုစွန့်စားမှုအသစ်တစ်ခုအတွက်ရောင်းဝယ်ရန်စဉ်းစားနေမည်ဖြစ်သော်လည်းမည်သည့်နေရာတွင်စတင်မည်ကိုမသိပါ။ အိမ်အသစ်တစ်လုံးရှာဖွေခြင်းသည်စိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ပြီးပြည့်စုံသောအသိုင်းအဝိုင်းတွင်အိမ်အသစ်တစ်ခုရှာဖွေခြင်းသည် ပို၍ ပင်ခက်ခဲသည်။ ကံကောင်းတာကလာမယ့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအငြိမ်းစားယူလာသူတွေနဲ့အတူဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဒီပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းအသိုင်းအဝိုင်း (၅၅) ခုကစိတ် ၀ င်စားပြီးအငြိမ်းစားယူပြီးဖြေရှင်းနေကြပြီ။
မေလ 6, 2021 မေလ 5, 2021 Stephanie Snyder	မှတ်ချက် Leave
အောက်ပါနည်းလမ်းများသည်သင့်အား ၀ န်ထမ်းအသစ်တိုင်းကိုလေ့ကျင့်ရန်ထိရောက်သောနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖန်တီးရန်ကူညီပါလိမ့်မည်။
အတိတ်ကာလ၌အသစ်သောငှားရမ်းခြင်းနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည် ကော်ပိုရိတ်လေ့ကျင့်ရေး ရုံး setting ကိုအတွက်ပစ္စည်းများ။ ပစ္စည်းပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်, ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပစ္စည်းအပေါ်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ ဤစနစ်က ၀ န်ထမ်းတိုင်းသည်တူညီသောလေ့ကျင့်မှုရရှိစေရန်အတွက်လိုက်နာမှုရှိစေရန်သေချာစေသော်လည်းသင့် ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်အကြောင်းအရာကိုလေ့လာသင်ယူခြင်းကိုသေချာစေရန်အဆင်ပြေမည်မဟုတ်ပါ။
မေလ 6, 2021 မေလ 4, 2021 Shahid Ibrahim	မှတ်ချက် Leave
ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအစားအစာ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်တို့အားမကြာခဏပြောပြသည်။ သင့်လျော်သောအစားအစာကရောဂါကူးစက်ခြင်း၊ ရောဂါများနှင့်အခြားအခြေအနေများကိုထိန်းသိမ်းထားရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီပေးပြီးတက်ကြွသောနေထိုင်မှုပုံစံကိုရရှိစေသည်။ အစားအစာတစ်ခုလုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအကျိုးပြုမည့်ပရိုတင်း၊ အဆီ၊ အဆီ၊ ဖိုင်ဘာ၊ ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓာတ်နှင့်အခြားထိုကဲ့သို့သောအာဟာရများပါ ၀ င်သည်။
မေလ 5, 2021 မေလ 4, 2021 Tracie ဂျွန်ဆင်	မှတ်ချက် Leave
၎င်းသည်မည်သည့်အရာကိုလိုက်စားရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လှည့်စားနိုင်သည် မိန့်ခွန်းရောဂါဗေဒအတွက်သခင်, ဒါမှမဟုတ်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားလယ်ပြင်။ ပထမ ဦး စွာ MA ဘွဲ့နှစ်ခုရှိကြောင်းသင်သိသင့်သည်၊ စာတမ်း (သုတေသန -based) နှင့် Non- စာတမ်း (သင်ခန်းစာအခြေစိုက်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်, ဒါမှမဟုတ်သင်ကြား) ။ သင်ရွေးချယ်သော MA အစီအစဉ်မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေသင်၏ဘဏ္ancesာရေးနှင့်အချိန်ကိုမအပ်နှံမီသင်သိထားရမည့်အချက်များရှိပါသည်။ သင်မဟာဘွဲ့တစ်ခုကိုလျှောက်ထားခြင်းမပြုမီသင်သိထားသင့်သည့်အချက်သုံးချက်ရှိပါသည်။
မေလ 5, 2021 မေလ 4, 2021 Filomena Mealy	မှတ်ချက် Leave
ပြည်တွင်းအခွန်များ ၀ န်ဆောင်မှုကမေလတွင်ပါ ၀ င်သူအားလုံးကိုသတိပေးသည် အမျိုးသားဟာရီကိန်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းရက်သတ္တပတ် နှင့်လည်းဖြစ်ပါတယ် အမျိုးသားတောမီးတောလ။ ယခုအချိန်သည်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များမှရှင်သန်ရန်အရေးပေါ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအစီအစဉ်များကိုဖန်တီးရန်သို့မဟုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အချိန်အခါကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပြည်ထောင်စုအရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီ (FEMA) သည်ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းများ၊ အပူပိုင်းမုန်တိုင်းများ၊ လေဆင်နှာမောင်း၊ ပြင်းထန်သောမုန်တိုင်းများ၊ ရေကြီးခြင်း၊ တစ် ဦး ချင်းစီ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်၎င်းတို့၏အရေးပေါ်အစီအစဉ်များကိုပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်အသစ်ပြောင်းရန်အချိန်ယူသင့်သည်။
မေလ 5, 2021 မေလ 4, 2021 Stephanie Snyder	မှတ်ချက် Leave
ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ကူညီရန်အထိန်းတစ် ဦး ကိုငှားရမ်းရန်အပြုသဘောဆောင်သည့်အကြောင်းပြချက်အချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ကလေးတိုင်းသည်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ထိန်းထားနိုင်စွမ်းတို့တွင်ထူးခြားသည်။ စာသင်ခန်းတစ်ခုတည်ဆောက်နေစဉ်ဆရာသည်သူတို့၏သင်ယူမှုလိုအပ်ချက်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းရန်ခက်ခဲသည်။ နှေးကွေးသောကလေးငယ်သည်နားလည်မှုအဆင့်ကိုအကန့်အသတ်ဖြစ်စေနိုင်သောအခြားသူများ၏အရှိန်အဟုန်နှင့်အမီလိုက်နေရမည်။
မေလ 4, 2021 မေလ 3, 2021 Stephanie Snyder	မှတ်ချက် Leave
သင်သည်သင်၏ကြယ်စုများကိုလေ့လာခြင်း၊ သင်ကဲ့သို့သောအခြားသူများနှင့်သင်မျှဝေထားသောအဆင့်မြင့်ဆုံးအရည်အသွေးများကိုတွေးတောခြင်းနှင့်သင်၏ဘ ၀ အတွက်ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခြင်းတို့ကိုသင်၏အချိန်ကိုဖြုန်းတီးသည်။ သင်၏အသက်တာ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသင်ရှာဖွေသောအခါ၊ ပင်လယ်၌ငါးအများကြီးရှိပါတယ်။ သင့်ဘ ၀ ၏အမြင့်ဆုံးမယုံနိုင်စရာကောင်းသောဖမ်းယူနိုင်မှုကိုရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးသဟဇာတဖြစ်သောရာသီခွင်အမှတ်အသားငါးခုအကြောင်းလေ့လာပါ။
မေလ 4, 2021 မေလ 3, 2021 Tracie ဂျွန်ဆင်	မှတ်ချက် Leave
သင်ဤနွေရာသီရာသီ၌ပျော်စရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတစ်ခုခုရှာဖွေနေပါသလား။ သင်၏ဒေသတွင်း၌သင်ရနိုင်သည့်အလွန်ကောင်းသောစွန့်စားမှုများစွာရှိသည်။ ယခုအချိန်သည်ထူးခြား။ အံ့သြဖွယ်ရာတစ်ခုကိုသင်စီစဉ်ရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ နွေရာသီကုန်ဆုံးချိန်တွင်သင်နှင့်သင်၏မိသားစုကြိုးစားနိုင်သည့်စွန့်စားခန်းအသစ် ၃ ခုကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
မေလ 3, 2021 မေလ 2, 2021 Stephanie Snyder	မှတ်ချက် Leave
ဒါကအိမ်မှာရောခရီးသွားနေချိန်မှာပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ပျက်မှုမှကာကွယ်ရန်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အဆင့်တစ်ခုမှာမိသားစုနှင့်သင့်ကားတွင်အသုံးပြုနိုင်သောမိသားစုအရေးပေါ်ကိရိယာတစ်ခုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ အောက်တွင်သင်ဤပစ္စည်းအတွက်သင်လိုအပ်ပစ္စည်းငါးခုရှိပါတယ်။
နိုင်ငံ၏အချို့ဒေသများတွင်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များသည်အသက်အရွယ်မရွေးလူများအားအကြီးအကျယ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။ ဤသည်မှာအဆိပ်ပြင်းသောမြွေများနေထိုင်ရာတိုင်းပြည်၏ဒေသများထက် ပို၍ မှန်ကန်သည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတွင်မြွေမျိုးစိတ်များ၊ မြက်ခင်းပြင်များ၊ ရေမက္ကဆီစင်များ၊ ကြေးနီခေါင်းများ၊ ဝါဂွမ်းနှင့်သန္တာမြွေများပါဝင်သည်။
မေလ 3, 2021 မေလ 2, 2021 ဇွန်လ Stepansky	မှတ်ချက် Leave
ငါမကြာသေးမီကဗစ်တာ Frankl 1905-1997 သြစတြီးယားစိတ်ပညာရှင်နှင့် "၏အရောင်းရဆုံးစာရေးဆရာအကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်အဓိပ်ပာယျအဘို့က Man ရဲ့ရှာရန်။ " သူသည် Auschwitz မှအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး ၁၉၄၆ စစ်ပွဲပြီးနောက်ဤစာအုပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင်အဓိပ္ပာယ်ရှာဖွေခြင်း၏အရေးကြီးသောအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏အတွေးအခေါ်များကိုချရေးခဲ့သည်။ သူသည်အမည်ဝှက်ဖြင့်ရေးရန်ရည်ရွယ်ခဲ့သော်လည်းနောက်ဆုံးအချိန်တွင်သူ၏အမည်ကိုထည့်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး၎င်းသည်ယခုနှစ်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့သည်။
မေလ 3, 2021 မေလ 2, 2021 Tracie ဂျွန်ဆင်	မှတ်ချက် Leave
သင်လျှပ်စစ်ကားကိုခေါ်သောရုပ်ရှင်များမှအဖြစ်မှန်သည်မကြာမီကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အဖြစ်မှန်ဖြစ်လာသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်ကိုသင်တောင်းဆိုနေချိန်တွင်ယာဉ်တွင်သင်၏လက်ကိုင်ဖုန်းကိုသုံးခြင်းကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်များရှိနိုင်သည်။ လွတ်လပ်သောယာဉ်မောင်း၏အနာဂတ်သည်အသံ command များမှအီးမေးလ်များနှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းများကိုပြန်ပေးလိမ့်မည်။ ကားများမှာကျဆင်းခြင်းနှင့်ယာဉ်အသွားအလာအတွက်လုံး ၀ စိတ်မ ၀ င်စားခြင်းကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်များလည်းပါရှိသည်။
မေလ 3, 2021 ဧပြီလ 28, 2021 supriya ghuge	မှတ်ချက် Leave
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာအရာများ၏အင်တာနက် (IoT) ကိုမျိုးဆက်သစ်အလိုအလျောက်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ လူနာများနှင့်၎င်းတို့၏စောင့်ရှောက်သူများကလိုအပ်သည့်နေရာတိုင်းတွင်ကျန်းမာရေးအချက်အလက်များနှင့်အရေးကြီးသောလက္ခဏာများကို ၀ တ်ဆင်နိုင်သော၊ ထိုအာရုံခံကိရိယာများသည် telemedicine နှင့် preventive treatment ကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုလူနာများ၏အိမ်များသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။
မေလ 3, 2021 ဧပြီလ 28, 2021 Olivia အိုလီဗာ	မှတ်ချက် Leave
Double-end ရေချိုးခန်းရေချိုးသည်ယူကေတွင်ရှာဖွေမှုအရှိဆုံးဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ သငျသညျဗတ်ခေတ်သစ်ရေချိုးခန်း၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာကြောင်းသဘောတူလိမ့်မယ်။ အိမ်ပိုင်ရှင်များသည်ရေချိုးရန်အတွက်ရေပန်းများကိုပင်အစားထိုးကြသည်။ သို့သော်၊ ရေချိုးခန်းရေချိုးမည့်အစားအစားထိုးမည့်အစားရေချိုးနိုင်သည်။ ဘာကြောင့်ရေများရေပန်းစားလာတာလဲဆိုတာကိုလူအများစုကရေချိုးခန်းရေချိုးခြင်းသည်သူတို့၏ကျန်းမာရေးနှင့်သာယာဝပြောမှုအတွက်မည်မျှကောင်းနိုင်သည်ကိုနားလည်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခက်ခဲတဲ့နေ့တစ်နေ့ပြီးတဲ့နောက်ရေချိုးတာကသင့်ကိုဖြေလျော့ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာလျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်သင်၏တစ်နေ့တာကိုအဆုံးသတ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သင်သည်အားကစားခန်းမ၌လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးနောက်ရေချိုးခြင်းသည်သင်၏ကျန်းမာရေးစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
မေလ 2, 2021 မေလ 2, 2021 Stephanie Snyder	မှတ်ချက် Leave
မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားပြီးနောက်သင်ထိုက်သည့်ပူးပေါင်းမှုနှင့်အထောက်အပံ့ကိုသင်ရရှိရန်အတွက်ရှေ့နေငှားရမ်းခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကိစ္စများစွာတွင်မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားပြီးနောက်သင့်ဘက်မှရှေ့နေတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးရှိရန်လိုအပ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, သင်အရည်အချင်းပြည့်မီသောဒဏ်ရာရှေ့နေငှားရမ်းရန်သင်လိုက်နာနိုင်သောအကြံပြုချက်ငါးခုရှိပါသည်။
မေလ 2, 2021 မေလ 2, 2021 McKenzie ဂျုံးစ်	မှတ်ချက် Leave
ပြtheyနာရှိရင်လူတိုင်းသင့်ဆီပြန်လှည့်လာကြတယ်။ သူတို့မှာမင်းမှာနားထောင်စရာကောင်းသောနား၊ ကိုင်ထားနိုင်တဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့မှီခိုဖို့ပခုံးရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ သငျသညျအခွားသူမြားအဘို့နက်ရှိုင်းစွာခံစားရသည်။ သင်၏ဘဝအတွေ့အကြုံသည်သင့်အားအလားတူအခြေအနေများတွင်အခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ကူညီသည်။ သင်ဝန်းကျင်ရှိသူများအတွက်နက်ရှိုင်းစွာခံစားရသည်။ လူတွေကိုသင်ကူညီဖို့လိုတယ်။ သင်ဟာစိတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့မင်းထင်တယ်။ မင်းဘဝမှာဘယ်လမ်းကိုသွားချင်တယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်။ ယခုတွင်သင်သည်စိတ်ပညာတွင်အလုပ်အကိုင်မည်သို့စရမည်ကိုသိရန်လိုအပ်သည်။
မေလ 2, 2021 မေလ 2, 2021 ဗစ်တိုးရီးယားစမစ်	မှတ်ချက် Leave
သင်၏တရား ၀ င်ကျင့်ထုံးပမာဏမည်မျှရှိသည်ဖြစ်စေ၊ သင်ကျင့်သုံးသည့်ဥပဒေအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေခြင်းသည် ဦး စားပေးဖြစ်သည်။ ဤသည်ကိုသင်တစ် ဦး ယှဉ်ပြိုင်မှုအစွန်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်ကိုတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်သင်၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမည့်အချိန်တွင်တရား ၀ င်လက်ထောက်များကိုငှားရမ်းခြင်းမပြုခြင်းကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချရန်အာရုံစိုက်ခြင်းသည်တန်ပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။
ပုံမှန် Windows Tech ပြTechနာ ၅ ခုကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
မေလ 1, 2021 မေလ 2, 2021 Tracie ဂျွန်ဆင်	မှတ်ချက် Leave
ကမ္ဘာပေါ်ရှိကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူအများစုသည် windows operating system ကိုအသုံးပြုကြသည်။ လတ်တလောအသစ်ပြောင်းခြင်းသည် windows 10 ဖြစ်သည်။ windows 8 ကိုလွှဲပြောင်းယူခဲ့သည်။ အဆင့်မြှင့်တင်မှုများပြုလုပ်နေလျှင်ပင်သင့်ကွန်ပျူတာတွင်အမြဲတမ်းနည်းပညာဆိုင်ရာပြissuesနာများရှိသည်။ သတင်းများအရနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုမည်ကဲ့သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုသင်မသိရှိပါ။
သင့်ကွန်ပျူတာသည်ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲပိတ်ထားပါကသို့မဟုတ်နှေးကွေးလာပါကသင်ထိုနေရာ၌အကူအညီမဲ့ဖြစ်နေသည်။ သင့်အားအများသုံး Windows နည်းပညာဆိုင်ရာပြtechnicalနာများကိုမည်သို့မည်ပုံဖြေရှင်းမည်နည်းနှင့် ပတ်သက်၍ နည်းစနစ်များကိုသင့်အားကျွန်ုပ်ဒီမှာပြောပြသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်သို့ရကြပါစို့။
မေလ 1, 2021 မေလ 2, 2021 Stephanie Snyder	မှတ်ချက် Leave
Church Vision ဆီသို့ဘတ်ဂျက်
နှစ်စဉ်အသုံးစရိတ်နည်းဗျူဟာသည်ချာ့ချ်ရှင်သန်ရန်အဘယ်အရာလိုအပ်ကြောင်းညွှန်ပြထားသည့်ကောင်းစွာဖော်ပြသောစာရွက်စာတမ်းမျှသာမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ကြီးထွားလာခြင်း၏ရိုးရှင်းမှုသည်သင့်ကိုအရူးလုပ်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေဖြင့်လာမည့်နှစ်များသို့ဘတ်ဂျက်လျာထားချက်ကိုချမှတ်ပါ။
ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲခြင်းသည်သင်၏ချာ့ချ်၏ပန်းတိုင်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစေရန်၊ ၎င်းသည်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်မဟာဗျူဟာတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ချာ့ချ်၏ရူပါရုံကိုအောင်မြင်ရန်မှန်ကန်သောအရင်းအမြစ်များကိုသတ်မှတ်ရာတွင်ခေါင်းဆောင်များအားကူညီနိုင်သည်။ အသေးစိတ်ကျသောဘတ်ဂျက်သည်ဘုရားကျောင်း၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုထိန်းချုပ်ရန်လည်းအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
မေလ 1, 2021 မေလ 2, 2021 Sierra Powell	မှတ်ချက် Leave
ခေါင်းဆောင်အများစုသည်အဖွဲ့အစည်း၏ယဉ်ကျေးမှုကိုတိုးတက်စေရန်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမိမိတို့ကိုယ်ကိုမေးကြသည်။ အမှန်တရားကတော့ ၀ န်ထမ်းတွေရဲ့အလုပ်ခွင်အပေါ်ဘယ်လိုရှုမြင်လဲဆိုတာကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ မကြာခဏဆိုသလိုကုမ္ပဏီ၏ယဉ်ကျေးမှုသည်အဖွဲ့အစည်း၏စိတ်နှင့်စုဆောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကွဲပြားသောအရာများသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏လုပ်ငန်းယဉ်ကျေးမှုများကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ အလုပ်တွင်ရှိသောအလုပ်သမားများ၏သဘောထားအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားသည်။ ကုမ္ပဏီများတွင်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်းကိုပြုလုပ်သည့်အခါ ၀ န်ထမ်းများပါ ၀ င်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ယန္တရားများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများသည်သူတို့၏ခံစားချက်အပေါ်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်သည်ကိုသတိပြုရန်လိုအပ်သည်။
သုံးသပ်ချက် - Samsung Galaxy S21 နှင့် S21 +
မေလ 1, 2021 မေလ 2, 2021 Gustavo Marques	မှတ်ချက် Leave
နောက်ဆုံးပေါ် Samsung ထိပ်တန်းစမတ်ဖုန်းမော်ဒယ်လ်တီထွင်မှုများကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ Samsung မှာစမတ်ဖုန်းလိုင်းအမျိုးမျိုးရှိပြီးဈေးသက်သာတဲ့မော်ဒယ်တွေလည်းပါရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Galaxy S line ကသူ့ရဲ့ရှေ့ပြေးဖြစ်မှာသေချာပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြီးခဲ့သည့်မော်ဒယ်လ်မှတစ်နှစ်အတွင်းအပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားကိုမမျှော်လင့်ပါ၊ သို့သော် S21 ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများသည်ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုထက်ကျော်လွန်သွားပါလိမ့်မည်။
ဧပြီလ 30, 2021 မေလ 2, 2021 Lizzie Howard	မှတ်ချက် Leave
တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်သည်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုစဉ်းစားမိနိုင်သည်။ အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအလုပ်တစ်ခုပြောင်းလဲခြင်းသည်အလုပ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲခြင်းမျှသာမဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်သည်လုံးဝကွဲပြားသောအလုပ်အမျိုးအစားသို့သွားနေခြင်းကြောင့်ရလဒ်အချို့ရှိသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအပြောင်းအလဲကိုစဉ်းစားတဲ့အခါသင်စဉ်းစားသင့်တဲ့အရာများ.
အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းပြောင်းလဲမှုကိုစဉ်းစားသောအခါသင်လုပ်နိုင်သည့်အဆိုးဆုံးအမှားမှာအလုပ်သစ်သစ်ထုတ်လုပ်သည့်လစာအတွင်းနေထိုင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင့်မှာလစဉ်အကြွေးဒေါ်လာတစ်ထောင်တန်ကြေးရှိမယ်ဆိုရင်လတစ်လကိုဒေါ်လာကိုးရာလောက်မနေနိုင်တော့ဘူး။ ယခုတစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်၌ရွေးချယ်ခွင့်မရှိချေ၊ သို့သော်ယင်းသည်ကွဲပြားသောအခြေအနေဖြစ်သည်။
ဧပြီလ 30, 2021 ဧပြီလ 28, 2021 Tracie ဂျွန်ဆင်	မှတ်ချက် Leave
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသည်သင်လက်ရှိ ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်အလျင်အမြန်တိုးချဲ့နေသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စတင်ပေါ်ထွက်လာသောပျံ့နှံ့နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်စိတ်ကူးနိုင်သည့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအမျိုးအစားအားလုံးနီးပါးတွင်အလုပ်အကိုင်များရရှိနိုင်သည်။ ကင်ဆာပညာရပ်တွင်လုပ်ကိုင်ခြင်းမှသည်ခွဲစိတ်ကုသမှုတွင်လုပ်ကိုင်သည်အထိဖြစ်သည်။
ဧပြီလ 30, 2021 ဧပြီလ 27, 2021 Jeff Romero	မှတ်ချက် Leave
ပုံမှန်အားဖြင့်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ထွက်ကုန်များအတွက်လူသိများသော၊ California ၏ချိုင့်ဝှမ်းချိုင့်ဝှမ်းသည်ကျယ်ဝန်းသောပွင့်လင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးယခုအခါကမ္ဘာလောကနှင့်တွေ့ဆုံနေပြီဖြစ်သည်။ Modesto, Fresno နှင့် Stockton ကဲ့သို့သောမြို့များသည်အိုင်တီ၊ သင်္ကေတ၊ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်နှင့်လုပ်ငန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းစသည့်နည်းပညာနှင့်ဆက်နွှယ်သောအလုပ်များတိုးများလာသည်။
ဧပြီလ 29, 2021 ဧပြီလ 29, 2021 Tracie ဂျွန်ဆင်	မှတ်ချက် Leave
လှေစီးခြင်းသည်ပျော်စရာကောင်းပြီးလူအများစုသည်အထူးသဖြင့်နွေရာသီတွင်ရေပေါ်ရွေ့လျားခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ငါးဖမ်းခြင်း၊ လှေစီးခြင်း၊ ရေကူးခြင်း၊ ရွက်လွှင့်ခြင်း၊ ရေကူးခြင်းစသည်တို့အတွက်မိမိကိုယ်ကိုရေပေါ်မှာထားသည့်အခါလှေစီးဘေးကင်းရေးကိုသင်နားလည်ဖို့လိုသည်။ စက်လှေဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုမသိရှိသည့်အပြင်ရာသီဥတုဆိုးရွားခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာတွင်အမှားတစ်ခုကြောင့်လှေအဖြစ်ဆိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ရောင်းသူအတွက်လမ်းညွှန် - သင်၏အိမ်ခြံမြေကိုအွန်လိုင်းတွင်စာရင်းပြုစုရန်အတွက်အချက် ၅ ချက်
ဧပြီလ 29, 2021 ဧပြီလ 28, 2021 Stephanie Snyder	မှတ်ချက် Leave
သင်၏အိမ်ခြံမြေကိုအွန်လိုင်းစာရင်းပြုစုရန်နှင့်သင်၏ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီရန်အကြံဥာဏ် ၅ ချက်ရှိသည်။
အရည်အသွေးမြင့်မားသောစာရင်းများပြုစုရန်အတွက်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်အသိုက်အ ၀ န်းနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့်ဆွဲဆောင်မှုများနှင့်အနီးကပ်ရှိသည့်အပြင်မိသားစုတစ်စုတည်းနေအိမ်သို့မဟုတ်တိုက်ခန်း၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များကိုသင်ဖန်တီးရန်လိုအပ်သည်။ အသုံးပြုသူအများစုသည်အိမ်ကိုအွန်လိုင်းရှာဖွေခြင်းတွင်ပထမ ဦး ဆုံးအွန်လိုင်းရှာဖွေကြသောကြောင့်သူတို့၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုရယူလိုပါကအသေးစိတ်ဖော်ပြရန်အရေးကြီးသည်။ ထိုတွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောရုပ်ပုံလွှာတစ်ခုကိုလည်းသင်ရေးဆွဲရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်အချိန်ကုန်သက်သာစေရန်နှင့်နောက်မှထပ်ခါတလဲလဲမေးသောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ရှောင်ရှားရန်ကြိုတင်စာရင်းပြုစုထားပါ။ ဒီအဆင့်ကသင်ဟာအရည်အချင်းအရှိဆုံးသောခေါင်းဆောင်များကိုသာရရှိမှာသေချာပါတယ်။ သင်၏စာရင်းအတွက်အရေးအသားဖော်ပြရန်အကူအညီလိုအပ်ပါက professional ကိုဆက်သွယ်ပါ အေးဂျင့်ခွင့်.
ဧပြီလ 28, 2021 ဧပြီလ 27, 2021 Stephanie Snyder	မှတ်ချက် Leave
အိမ်တိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုထိပ်ဆုံးအိမ်အသုံးစရိတ်များအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအခြေခံအားဖြင့်အိမ်ပိုင်ရှင်များရင်ဆိုင်နေရသောအရေးအကြီးဆုံးကုန်ကျစရိတ်များမှာအပူ၊ လျှပ်စစ်၊ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှအိမ်ပိုင်ရှင်သည်ဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီ။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသည်။ ထို့ကြောင့်လူအများစုကထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်စွမ်းအင်ချွေတာသည့်ကိရိယာများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေကြသည်။ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုသန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်အမျိုးအစားတစ်ခုဟုသတ်မှတ်သော်လည်း၎င်းကိုလည်ပတ်ရန်ကုန်ကျစရိတ်အများဆုံးဖြစ်သည်။
ဧပြီလ 28, 2021 ဧပြီလ 26, 2021 Tracie ဂျွန်ဆင်	မှတ်ချက် Leave
သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုပြည့်မီရန်နှင့်သင်လိုအပ်သောအောင်မြင်မှုကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရန်အတွက်သင်၌ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိရန်လိုအပ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားသောကြောင့်သင်မလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်နှင့်သင်၏စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးသွားနိုင်သည်။ ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာကအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်သုံးချက်ကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်သင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်လင်ပြတ်သားမှုကိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဧပြီလ 28, 2021 ဧပြီလ 27, 2021 Filomena Mealy	မှတ်ချက် Leave
ယခုအခွန်ထမ်းများစွာသည်သူတို့၏ဖက်ဒရယ်အခွန်အခများကိုတင်သွင်းလာကြပြီးသူတို့၏ပြန်အမ်းငွေနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစိတ်အားထက်သန်နေကြသည်။ ပြန်အမ်းငွေနှင့် ပတ်သက်၍ အခွန်ထမ်းများအားလှည့်ဖြားနိုင်သောဘုံဒဏ္severalာရီများစွာရှိသည်။
ယခုနှစ်ငွေပြန်အမ်းခြင်းဆိုသည်မှာ ၂၀၂၀ တွင်အခွန်ရှောင်ရန်မလိုအပ်ပါ
လာမည့်နှစ်တွင်အံ့အားသင့်စရာမဖြစ်စေရန်အခွန်ထမ်းများသည်လာမည့်နှစ်အတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်သင့်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်နည်းတစ်နည်းမှာ ၄ င်းတို့၏အခွန်ငွေကိုအလုပ်ရှင်နှင့်ညှိရန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကိုအသုံးပြု။ လုပ်ဖို့လွယ်ကူသည် အခွန်ရှောင်ခြင်းခန့်မှန်း။ ဤကိရိယာသည်အခွန်ထမ်းများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အလုပ်ရှင်သည်မှန်ကန်သောပမာဏကိုသိုထားခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ ဤသည်သည်ယခုနှစ်အခွန်ပြန်ပို့ခြင်းမှမျှော်လင့်မထားသောရလဒ်ရသူမည်သူမဆိုအတွက်အထူးအရေးကြီးသည်။ ထို့အပြင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း၊ ကွာရှင်းခြင်း၊ ကလေးမွေးဖွားခြင်း၊ မွေးစားခြင်းသို့မဟုတ်လူတစ် ဦး အားမှီခိုသူအဖြစ်မခံယူခြင်းစသည့်ဘဝဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုကြုံတွေ့ရသောအခွန်ထမ်းများကသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုစစ်ဆေးရန်တိုက်တွန်းပါသည်။
ဧပြီလ 28, 2021 ဧပြီလ 26, 2021 ဗစ်တိုးရီးယားစမစ်	မှတ်ချက် Leave
အချိန်ရောက်လာပြီ၊ မင်းဟာအကျိုးအမြတ်မယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်ထောင်ပြီးရပ်ကွက်ကိုပြန်ပေးဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတယ်။ အကျိုးအမြတ်မယူသောအချက်သည်အစပြုလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ သင်သည်ကြိုးစားအားထုတ်ရန်၊ ဝေဖန်ရန်၊ စိတ်ရှည်ရန်နှင့်သင်၏အလုပ်ကိုကတိကဝတ်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏အမြတ်အစွန်းမဟုတ်သောအစပြုခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းသည်ငြီးငွေ့ဖွယ်၊ ခြိမ်းခြောက်ရန်နှင့်လွှမ်းမိုးရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အောင်မြင်မှုရရန်သင်ဆုံးဖြတ်ချက်များစွာလိုအပ်လိမ့်မည်။ အမြတ်အစွန်းမယူသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်ထောင်ရန်မည်သို့လမ်းညွှန်ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဧပြီလ 27, 2021 ဧပြီလ 27, 2021 Filomena Mealy	မှတ်ချက် Leave
ပြည်တွင်းအခွန်များဌာနသည်အခွန်ထမ်းများအားတိုက်တွန်းသည် အခွန်ပညာရှင်များ အခွန်ရှင်းတမ်း၊ ပြန်အမ်းငွေနှင့်ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းများအားမြန်ဆန်စေရန်အီလက်ထရောနစ်နည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုရန် IRS.gov အများအပြားတင်ဆက်ပေးသည် task-based tools တွေကို နှင့်လူများ၏အခွန်အခများသွားလာရန်ကူညီပေးမည့်အင်္ဂါရပ်များ။ အားလုံးရရှိနိုင်ပါသည် 24/7/365 ။
ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်းအခွန်အကောက်ဆိုင်ရာအခွန်ပြန်အမ်းငွေများနှင့်ပြန်အမ်းငွေထုတ်ပေးခြင်းသည်အထူးအရေးကြီးသည်။ မြန်ရန် ပြန်အမ်း နှင့် နှောင့်နှေးခြင်းကိုရှောင်ပါ အပြောင်းအလဲနဲ့, IRS မှအခွန်ထမ်းမှပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြံပေးသည် အီလက်ထရောနစ်ဖိုင် နှင့် တိုက်ရိုက်သိုက် အဖြစ်မကြာမီသူတို့လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်ရှိသည်အဖြစ်။
ဧပြီလ 27, 2021 ဧပြီလ 26, 2021 Sierra Powell	မှတ်ချက် Leave
အသွင်အပြင်နှင့်ပတ်သက်လာလျှင်လူတိုင်းကသူတို့တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးကြည့်ချင်ကြသည်။ ရှုပ်ထွေးသောအချိန်ဇယားများ၊ အလုပ်များနေသောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များ၊ ကလေးများကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အလုပ်များခြင်းကြောင့်ကြည့်ကောင်းနေအောင်ဆက်လက်ကြိုးစားရန်ခက်ခဲနိုင်ပြီးလူအများစုကသူတို့အနေနှင့်မည်သို့မျက်နှာမူထားကြောင်းဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ အခြားသူများကကျွန်ုပ်တို့ကိုမည်သို့ထင်မြင်ကြောင်းဖော်ပြနိုင်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲတမ်းကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုရန်အရေးကြီးသည်။ အခြားသူများကမူသူတို့၏ပုံသဏ္changeာန်ကိုပြောင်းလဲရန်ကြောက်ရွံ့သကဲ့သို့နှစ်ပေါင်းများစွာအတူတူပင်ရှိနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထိုခုန်ပေါက်မှုကိုယုံကြည်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုပျော်ရွှင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲခြင်းအချို့ပြုလုပ်ရန်အရေးကြီးသည်။ အောက်ပါတို့သည်သင်၏အသွင်အပြင်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောခံစားမှုရရှိစေရန်နည်းလမ်း ၅ ခုဖြစ်သည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ HOA ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းပြသည်
ဧပြီလ 26, 2021 ဧပြီလ 23, 2021 Jeff Romero	မှတ်ချက် Leave
သင်အမြဲနေထိုင်လိုသောလှပသောပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုကိုသင်တွေ့ရှိသည်။ သင်၏အိမ်နှင့်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအိမ်များသည်တင့်တယ်လှပသောဥယျာဉ်များ၊ ပြည့်ဝစွာဖြတ်တောက်ခံထားရသောမြက်ခင်းများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပန်းများနှင့်တိတိကျကျခြယ်သထားသည့်အိမ်များရှိသည်။ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ အိမ်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအိမ်ပိုင်ရှင်များအသင်းအဖွဲ့ (HOA) ကစီမံခန့်ခွဲနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
7 Creative Virtual ရန်ပုံငွေရှာအကြံပြုချက်များ
ဧပြီလ 26, 2021 ဧပြီလ 23, 2021 ဂျက်ရိုဂျာ	မှတ်ချက် Leave
လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသောကပ်ရောဂါကြောင့်အမြတ်အစွန်းမယူသောအဖွဲ့အစည်းများသည်ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအစီအစဉ်များကိုစီစဉ်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ လူမှုရေးအရဝေးကွာသောနေရာများသည်တစ်နာရီလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော်လည်းရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းအစီအစဉ်များကိုကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ များသောအားဖြင့်ပုံမှန်အဖြစ်အပျက်များကိုလုနီးပါးလက်ခံထားသောကြောင့်ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းဖြစ်ရပ်များကို virtual လမ်းကြောင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဧပြီလ 25, 2021 ဧပြီလ 22, 2021 မင်းသမီး Emma Willson	မှတ်ချက် Leave
စီးပွားရေးသို့မဟုတ်အပန်းဖြေရန်ခရီးသွားခြင်းသည်အမျိုးသားများအနေဖြင့်သူတို့၏ပုလ်ဘက်နှင့်ထိတွေ့ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ခရီးသွားခြင်းသည်အမျိုးသားများအတွက်အထူးသဖြင့်သူတို့၏ထူးခြားသည့်အချက်အလက်များမရှိဘဲသူတို့အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လူတစ်ယောက်ဟာအိမ်နဲ့ဝေးတဲ့အချိန်မှာမလုပ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်။ နယ်လှည့်ခရီးသွားများသည်ထိုပစ္စည်းများသည်မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိစေသည်။
7 ထိရောက်သောအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက် Tech Giant သိကောင်းစရာများနှင့်မဟာဗျူဟာများ
ဧပြီလ 25, 2021 ဧပြီလ 22, 2021 ဂျိမ်းလူးဝစ်	မှတ်ချက် Leave
အမျိုးမျိုးသောနည်းပညာ -based ဝန်ဆောင်မှုများကိုပူဇော်ကြောင်းကုမ္ပဏီအများအပြားရှိပါတယ်။ သူတို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းအသစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးရန်နေ့ရောညပါအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေမှာဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှု၊ ဆော့ဗ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစတာတွေပါဝင်တယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်လောကနှင့်ဝေးကွာနေခဲ့သည့်စီးပွားရေးပင်လျှင်ယခုအဆင့်မြင့်နည်းပညာသို့ပြောင်းလဲနေသည်။
ဧပြီလ 24, 2021 ဧပြီလ 21, 2021 Tracie ဂျွန်ဆင်	မှတ်ချက် Leave
ဧပြီလ 24, 2021 ဧပြီလ 22, 2021 Anil Kumar က	မှတ်ချက် Leave
Cross-Platform App Development ဆော့ဝဲ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲပတ် ၀ န်းကျင်များသို့မဟုတ်များပြားလှသောပလက်ဖောင်းများအတွက်ထုတ်ကုန်များကိုတီထွင်ခြင်း၏နည်းလမ်းဟုမှတ်ယူနိုင်သည်။ ဒီပလက်ဖောင်းပလက်ဖောင်းအက်ပလီကေးရှင်းသည်များပြားလှသည့်နှစ်များအတွင်းလူကြိုက်များခဲ့ပြီးဆင့်ကဲတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ၏စိစစ်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းနေသည်။ Mobile Application Development Services ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသုံးစွဲသူများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အဓိကအရာမှာအချိန်တိုအတွင်းအနာဂတ်ချဉ်းကပ်မှုကိုကူညီရန်ဖြစ်သည်။
ဧပြီလ 23, 2021 ဧပြီလ 22, 2021 Stephanie Snyder	မှတ်ချက် Leave
မိဘတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်သည်သင်၏ကလေးများနှင့်မိသားစုအစားအစာများကိုသေချာစွာအကောင်အထည်ဖော်ရန်သေချာစေရမည်။ မိသားစုအစားအစာများသည်နှစ်သိမ့်မှုဖြစ်စေသောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသူတို့နှင့်နှောင်ကြိုးခိုင်မြဲစေသည်။ ကိစ္စအများစုတွင်ကလေးများသည်မိသားစုအစားအစာစားခြင်းသဘောကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်အရာနှင့်မည်သည့်အရာအကြောင်းမဆိုပြောဆိုရန်အခွင့်အလမ်းကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
12... 113 ပို့စ်အဟောင်းများ